Ehime tanjerịn -China Yixinhe Trading
Ehime asụsụ Mandarin oroma nwere gburugburu udi, ọchịchịrị oroma agba, mmanụ cell mkpa, ezigbo, mara mma anya, mfe bee. Sugar 15 °, acid 0,5 Celsius n'okpuru, ọ dịghị nuclear, nụrụ ụtọ ezi slag, esi ísì ụtọ na-enye ume ọhụrụ, magburu onwe flavor. Eguzogide ọgwụ nchekwa, oyi na-atụ ndị na-eguzogide, magburu onwe ya mkpụrụ, na-arụpụta nke a eriri, bụ nnọọ ekwe n'oge maturing iche citrus. Mbenata acid n'oge, Ehime citrus na ọgwụgwụ nke November nwere ihe kasị mma uto, ma ke ufọt ufọt November ka ahịa. Ehime citrus na Nankou tozuru okè ...
Ehime asụsụ Mandarin oroma nwere gburugburu udi, ọchịchịrị oroma agba, mmanụ cell mkpa, ezigbo, mara mma anya, mfe bee. Sugar 15 °, acid 0,5 Celsius n'okpuru, ọ dịghị nuclear, nụrụ ụtọ ezi slag, esi ísì ụtọ na-enye ume ọhụrụ, magburu onwe flavor. Eguzogide ọgwụ nchekwa, oyi na-atụ ndị na-eguzogide, magburu onwe ya mkpụrụ, na-arụpụta nke a eriri, bụ nnọọ ekwe n'oge maturing iche citrus.
Mbenata acid n'oge, Ehime citrus na ọgwụgwụ nke November nwere ihe kasị mma uto, ma ke ufọt ufọt November ka ahịa. Ehime citrus na Nankou tozuru okè na n'otu oge ahụ, ma Ehime citrus nwere ihe obi slag, na ọ dịghị ihe sere n'elu anụ ahụ, merie adịghị ike nke ndị Nankou mmiri ụkọ, Ehime bụ ihe kasị mma na-eji dochie iche Nankou, adabara kwa afọ nkezi okpomọkụ 16C Celsius cultivation , ọ bụ na-na ezigbo umu ke edere edere ọnu citrus.
Ehime Citrus bụ precocious. Ikwu n'ozuzu iche oroma tozuru okè oge nke ihe a ọnwa ma ọ bụ otú ahụ. Mma jupụta ohere oge nke citrus ahịa. Mkpụrụ owuwe ihe ubi dị ka citrus mkpụrụ okè, na-eji, ahịa kwesịrị ikpebi ihe ubi oge. mgbe Rain na mkpụrụ noodles akọrọ bụghị bulie mkpụrụ. Mkpụrụ ọrụ ga na-eyi uwe, na gburugburu mkpụrụ cutter bee mkpụrụ na mkpụrụ stalk ọnụ, mgbe ahụ bee mkpụrụ pedicle, jiri nwayọọ. Na iji nke si n'èzí n'ime, si n'elu na ala na-eburu mkpụrụ. -Achọ n'Aka niile mkpụrụ akpa mgbidi ezigbo, ubi nke mkpụrụ kwesịrị ka a gaa na nkwakọ ubi ma ọ bụ nchekwa. Zere anyanwụ na mmiri ozuzo.
Osote: Mkpụrụ osisi grepu
China Ehime tanjerịn
Ehime tanjerịn N'ogbe
Fresh Cirtus Mkpụrụ osisi
Mandarin Orange Mkpụrụ
N'ogbe Ehime tanjerịn